Faahfaahino Laga Helayo Qarax Ka Dhacay Magaalada Ximis. – Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Qarax Ka Dhacay Magaalada Ximis.
calamada February 25, 2017 2 min read
Ugu yaraan 42 qof ayaa ku dhintay qaraxyo xooggan oo lala beegsaday saldhigyo melleteri oo ciidamada Nuseyriyiinta ku leeyihiin magaalada Ximis ee bartamaha wadanka Suuriya.
Wararka ka imaanaya Suuriya ayaa sheegaya in laba qarax oo loo adeegsaday gaadiid walxaha qarxa lagasoo buuxiyay lagu weeraray laba saldhig ammaankooda si aad ah loo ilaaliyo waxaana dhintay tobaneeyo askar iyo saraakiil ah.
Warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda dabadhilifka ah ee Bishaar Al-asad hoggaamiyo ayaa sheegtay in dadka dhintay ay kamid yihiin 2 Jeneraal oo kamid ahaa Masâ€™uuliyiinta ammaanka Gobolka Ximsi.
Jeneraal Xassan Dacbuuk madaxii Faraca Amniga Caskariga gobolka Ximso iyo Col. Cahad Caabid Muxamed ayaa kamid ahaa saraakiishii ku halaagsantay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada ximis.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in tobaneeyo kale oo saraakiil melleteri iyo kuwa sirdoon ubadan ay ku halaagsameen camaliyaatkii ka dhacay bartamaha magaalada Ximis.
Wakaaladda wararka ufaafisa xukuumadda Dimishiq ayaa qortay weerar xooggan lagu qaaday xarumaha xukuumadda ee magaalada ximis, ilaha caafimaadka ayaa sheegay in dhaawacyo 100 qof kabadan loola cararay isbitaallada uu gacanta ku haayo nidaamka nuseyriga ee magaalada ximis.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerarada oo laba ahaa lagu kala qaaday xarumaha faraca amniga melleteriga iyo faraca amniga dowladda xilligaasi oo saraakiisha amniga ay lahaayeen kulan lagu gorfaynayay xaaladda dagaal ee gobolka.
Warar kale ayaa iyana sheegaya in ragga weerarka fuliyay oo isugu jiray inqimaasiyiin iyo istish-haadiyiin ay gaarayeen 6 dagaalyahan.
Kooxda Hay’ada Taxriiru Shaam ayaa sheeegatay Mas’uuliyadda weerarada ka dhacay magaalada Ximis, bayaan ay kooxdu ku faafisay baraha Internetka ayay ku sheegtay in 5 dagaalyah oo kamid ah ciidamadeeda ay weerarka fuliyeen waxayna ku dileen tobaneeyo sarkaal oo uu kamid yahay Â Ibraahim Darwiish madaxii amniga dowladda Ximis.
Waa Weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee Nidaamka Bishaar Al-asad uu la kulmo tan iyo markii uu cadawgu qabsaday magaalada Xalab ee Waqooyiga dalka Suuriya daba yaaqadii sanaddii 2016.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Caalamulyowm. 29-05-1438Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Oo Caawa Xiiso Gaara Leh.30-05-1438Hijri.